Why Elections Are a Pillar of Stability in Somalia – Horn Observer | Somalia News
Hay’adda FAO oo sheegtay inay yaraatay xawaaraha duufaanta GATI.
Muqdisho:-Hay’adda FAO ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Beeraha iyo cunada ayaa sheegtay in ay iminka daciiftay oo ay tabar dareysay duufaanta GATI ee xeebaha bari ee Soomaaliya ku dhufatay 22 bishaan November. Duufaanta ayaa xawaaraheedu yaraaday 12-saac ee la soo dhaafay, iyada oo dhanka waqooyi galbeed u jiheysatay. Warbixinta ay hay’adda FAO soo saartay ayaaa lagu sheegay in roobab xoogleh oo la xiriira duufaanka ay da’i doona illaa 26 November 2020. Saameynta duufaanta ay deegaanka u geysatay ayaa weli jirta sida FAO tilmaantay. Dhanka Somaliland waxay sheegtay in baddu weli kacsan tahay, isla markaana aan la isku haleyn karin in laga kalluumeysto. Sidoo kale dhanka Somaliland waxaa la saadaalinaya roobab dhex dhexaad ah sadaxda cisho ee soo socota ka da’i doono deegaannada maamulkaas. Puntland ma jiraan roobab la faliyo in ay hooraan sida warbixinta lagu sheegay.
War Deg Deg ah:Ciyaaryahankii caanka ahaa Diego Maradona oo geeriyooday
Ciyaartooygii caanka ahaa ee reer Argentin Diego Maradona ayaa geeriyooday isaga oo ay da’diisu tahay 60 jir. Diego oo dalkiisa Argentina ugu ciyaari jiray dhanka weerarka ahaana maamulaha kooxda qaranka ayaa waxa lagu guuleystay bishan November qalliin dhanka maskaxda looga sameeyay. Waxaa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan ee caalamka soo marta sanadihii sideetameyadii. Maradona waxaa uu ahaa Kabtanka kooxda qaranka markii sanaddii 1986 koobka aduunka uu ku guuleystay dalkiisa Argentin. Waxaa xilligaa shaqsi ahaan lagu tilmaamay in uu gacan wayn ka geystay guusha uu dalkiisa gaaray. Intii uu xirfadda ku jiray waxaa uu sidoo kale u dheelay kooxaha Barcelona iyo Napoli.
Why Elections Are a Pillar of Stability in Somalia – Horn Observer
Why Elections Are a Pillar of Stability in Somalia Horn Observer